Faah-faahin Qarax Muqdisho ka dhacay | Keydmedia
Faah-faahin Qarax Muqdisho ka dhacay
Qaraxa ayaa ka dhacay agagaarka Suuqa Beerta ee degmada Waaberi, waxaana ku dhaawacmay hal ruux.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa faah-faahinno dheeraad ah laga helayaa qarax jugtiisa meelo badan laga maqlay oo fiidnimadii caawa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka.
Qaraxaan oo la sheegay in uu ahaa nooca Miinada dhulka lagu aaso ee laga hago meelaha fog fog ayaa ka dhacay inta u dhaxeyso waddada isku xirto Suuqa Beerta iyo iskuulka 21 October oo kuwada yaallo Degmada Waaberi ee gobolka Banaadir.
Goob joogayaal ayaa sheegaya in qaraxa lala eegtay gaari nooca raaxada ah oo marayay waddada dhinaceeda, waxaana lagu soo waramayaa in uu ku dhaawacmay ruux gaari saarnaa, walow aan khasaaro kale la soo warin, marka laga reebo bur bur soo gaaray gaariga.
Ciidamada amaanka ayaa qaraxa kadib goobta soo gaaray, iyagoona halkaas ka bilaabay baarito lagu baadi goobayo cidda looga shakisanyahay in ay ku lug laheyd qaraxaas.
Ilaa iyo hadda Hay'adaha amaanka faah-faahin raami ah kama bixin qaraxaan.
Magaalada Muqdisho oo bilihii la soo dhaafay nabdooneed ayaa waxaa maalmahaan ku soo badanaya weerarada ismiidaaminta ah iyo qaraxyada remote control-ka laga hago ee lala beegsado gaadiidka dowladda iyo masuuliyiinta kale.
Xogta Ganacsato caan ah oo lagu xiray Muqdisho
Warar 29 September 2020 22:38
Dowladda ayaa dhib ku haysa dadka ganacsatada ah, iyada oo aanay markii hore ammaankoodu sugeynin.
Beesha Habar-gidir oo taageertay ‘CC Shakuur ’
Warar 29 September 2020 22:14
‘Qoor Qoor’ oo caawa Muqdisho gaaray
Warar 29 September 2020 21:44
Galmudug iyo AMISOM oo ka shiray dagaallada Al-shabaab
Warar 29 September 2020 21:31